Amaphupho ngezinto zasendlini – iAfrika
Amaphupho ngezinto zasendlini
Asho ukuthini amaphupho ngezinto zasendlini? Lokhu kuhlanganisa izikhwama nobhasikidi, izincwadi, amabhokisi, izinto zokwakha, amakhadi namadayisi, amakhethini, okhiye, izinaliti nophini, amaphephandaba, amapayipi, amathini, amathawula, izambulela namawalethi.
Tags Izinto zasendlini
Uma uphupha ukuthi usebenzisa isambulela kuyibhadi ikakhulukazi makungesona esakho. Kusho ukuthi kuzoba nokuhlupheka nosizi empilweni yakho. Uma ulahlekelwe yisambulela uzolahlekelwa yinto ebalulekile maduzane.
Uma uphupha ukuthi uzomisa ngethawula izinkinga noma ukugula okukuhluphayo kuzohamba.
Uma uphupha ukuthi unoketshezi oluncane lwethini kusho ukuthi kufanele uqaphele abantu ongabazi ngoba bangakudalela izinkinga.
Uma uphupha ukuthi ubhema ngepayipi kusho ukuthi izinkinga ezikuhluphayo zizophela maduzane nje.
Uma uphupha ukuthi ufunda iphephandaba kuzoba noshintsho empilweni yakho maduzane nje kakhulu.
Amaphupho ngezinaliti nophini
Uma uphupha ukuthi usebenzisa izinalithi ophini noma izipeletu uzoba namashwa ebudlelwaneni bakho nabanye abantu futhi udumale kwezothando.
Tags Izinaliti, Ophini
Uma uphupha ubona okhiye kuyibhadi. Kuzoba nezinkinga ebhizinisini lakho maduzane noma uzolwa nomuntu ngakho ke bheka ulaka lwakho.
Tags Isikhiye, Izikhiye, Okhiye
Uma uphupha ukuthi uyawavala noma uyawavula amakhethini kusho ukuthi umuntu engadlala ngawe maduzane ngakho ke qaphela.
Amaphupho ngamakhadi namadayisi
Uma uphupha uzibona udlala amakhadi noma amadayisi kusho ukuthi uzoba nenhlanhla nezimali ikakhulukazi uma udlala umdlalo ngazo.
Tags Amadayisi, Amakhadi
Uma uphupha ukuthi ubheke ngaphakathi kwebhokisi wathola into obungayilindele kungenzeka ube nezinkinga zemali maduzane.
Amaphupho ngezikhwama nobhasikidi
Uma uphupha ukuthi unesaka isikhwama noma ubhasikidi kuyibhadi ikakhulukazi uma kungenalutho phakathi. Kusho ukuthi awukwazi ukuthemba abantu osebenza nabo noma kungenzeka ube nenkinga emsebenzini.
Tags Izikhwama, Obhasikidi
Uma uphupha ukuthi ufunda izincwadi kusho ukuthi kungenzeka uhlangabezane nokulahlekelwa maduzane nje ngenxa yabangani bakho abangathembekile. Uma uphupha ukuthi ufunda izincwadi zesikole kusho ukuthi uzojabula maduzane ngenxa yokusebenza kwakho kanzima. Amaphupho ngesikole. Amaphupho ngezivivinyo. Amaphupho ngemfundo.
Amaphupho ngezinto zokwakha
Uma uphupha ukuthi ubone izinto zokwakha njengosimende nezitini kuyibhadi. Kuzoba nokulwa empilweni yakho maduzane nje noma uzodumala mayelana nezinto ozitholile empilweni. Uma uphupha izinto zamapulangwe njengezinduku noma amapulangwe kusho ukuthi kuzoba nezinkinga empilweni yakho maduzane nje uma ungathathi ikhefu.